May 2021 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uMfundo Zulu, umsunguli weJengo Creative Studio yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Wenza ezibukwayo onebhizinisi lobuciko bokuphaphamisa izakhiwo. Wafundela lo mkhakha engaqondile kanti uzothola ukuthi uyawuthanda. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WAYEFISA ukufundela ukudweba amapulani ezindlu kodwa kwaba nezimo zempilo ezingavumanga nokwagcina ngokuthi abhalisele i-interior design ngoba ethi ufuna into ethi ayicishe isondelana naleli phupho lakhe.
UNkk uLindiwe Khuzwayo, iNhloko yezokuXhumana kuMasipala waseThekwini
Usesebenze ezimbonini ezihlukene kanti konke lapho edlule khona siyabonakala isandla sakhe. Manje la magalelo adume ngawo sekubhekwe ukuthi awasebenzise ukulekelela uMasipala waseThekwini uxhumane kangcono nezakhamuzi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
UMHOLI ukwazi ukuzuza izinto ezinhle nezinkulu uma enobudlelwano obuhle nabambisene nabo ngoba akuyena ngqo owenza umsebenzi kodwa yilabo abasuke bengaphansi kwakhe. Ngakho kumqoka ukuba nobudlelwano obuhle nobaholayo, ukwazi abakulindele kuwena futhi ukuhloniphe kanti nezwi lakho ulisebenzise.
USiphesihle Mhlongo, odume ngelikaSippy The Cooking Teen, uyapheka, abhake afundise nezinye izingane
Umuntuza ofundisa ontanga bakhe ukupheka nokubhaka usenenkampani ethi yena. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
INTOMBAZANE yaseNewlands, eThekwini, KwaZulu-Natali, liyavuthwa ibhizinisi layo lokupheka nokubhaka.
UNkk uZanele Maphumulo, umsunguli weMabliza Lifestyle yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Ukusukumela ukunciphisa isisindo somzimba kumvulele iminyango esikhiqize inqwaba yamabhizinisi emikhakheni ehlukene. Umsunguli weMabliza Lifestyle uxoxe noSLINDILE KHANYILE
EKHULA wayazi ukuthi unesifiso sokujimisa abantu noma ayengaqondi kahle ukuthi wumsebenzi owenziwa kanjani futhi ofundelwa kuphi. Kodwa wathi uma eyibika indaba kunina akangayizwa kahle wase ekhetha omunye umkhakha.
Umbuso wentando yabantu ulethe izinselelo ebukhosini bendabuko
Izithombe: wuCOGTA noGoogle
Umbango wobukhosi babaBalobedu usuphinde waqubula imibuzo ngokuthi kungabe imibango yamakhosi idinga inkantolo yawo ekhethekile. ULUCAS LEDWABA uyabika
NGOJUNI wango-2017 umhlangano weKomiti lasePhalamende eliqondene nokuBambisana nobuHoli beNdabuko lezwa ukuthi ikhomishini eqokwe ukuxazulula imibango ethinta ubuholi bendabuko isithole amacala awu-1 224.
UNksz u-Innocentia Motau, umsunguli we-Itu Golf Wear yaseGoli, eGauteng
Uthando lomdlalo wegalofu luzale ibhizinisi lezimpahla zokugqoka. Usomabhizinisi usenezimpahla zakhe zegalofu ezidle ngokuhluka. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
EMVA kokugajwa wuthando lomdlalo wegalofu, uNksz u-Innocentia Motau unqume ukwengeza izimpahla zokugqoka ezizohambisana nalo mdlalo, okhonzwe ngabantu abadla izambane likapondo.
Sabalalisa umqondo, uhlokoze imithombo eminingi yokungenisa imali, kuloba uNtokozo Biyela
NAMUHLA akesibheke indaba yokuthembela emthonjeni owodwa uma singosomabhizinisi. Ngiye ngiphatheke kabi ukubona inqwaba yabantu bakithi enamabhizinisi ahamba kahle, izinto ziwavuma kodwa uthole ukuthi abanalwazi lokuthi bangayitshala kuphi imali yabo ukuze izale.
Ukulungisa izinkinga e-Eskom kubalulekile ukulungisa izinkinga zomnotho wezwe, kuloba uBusi Mavuso
SIYIZINHLANGANO ezimele osomabhizinisi sihlale siphikisana ngokuthi kumele kube nezinguquko ezinqala ukuze umnotho waseNingizimu Afrika ukhule. Loko kusho ukuguqula izinto kusetshenziswa imigomo ekhona.
I-Transnet neMcKinsey & Company bamemezele ukuthi sebesiphothulile isivumelwano semali iMcKinsy eyazibophezela ukuyibuyisela iTransnet kwiJudicial Commission of Inquiry ngoDisemba wango-2020. Kule mali ewu-R870 million kunemali eyakhokhelwa iMcKinsey ngomsebenzi weRegiments Capital nenzalo.
Ikusasa lemboni yezolimo lincike ebuchwephesheni besimanje
Abalimi abasafufusa bakhuthazwa ukuthi bajwayele ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje. UMASOKA DUBE uyabika
UMLIMI waseLimpopo ukhathazekile ngokuthi ukukhula kwebhizinisi lakhe kuzonqindwa wukungabi nobuchwepheshe besimanje. Uthi loku kusalela emuva kudalwa wukuntula imali yokuthuthukisa ubuchwepheshe abusebenzisayo.
UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya icala elifakwe wuNdlunkulu wokuqala weSilo esisanda kukhothama nofuna uhhafu wefa
UMnu uSibusiso Khathi, ongumunye wabanikazi beKhathi Charcoal yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Bangabafana bandawonye, bagabe ngeziqu zemikhakha ehlukene namakhono ehlukene. Bazithela ethubeni lebhizinisi lokukhiqiza amalahle angambiwa phansi. ULANGA KHANYILE uxoxe noyedwa
INDABA yaqala ngemva kokuthi abafana bandawonye beyoshaywa wumoya. Kulelo holidi labo ngo-2016 ithuba lokuqala ibhizinisi laziveza. Namuhla ibhizinisi selihlangene wena owabona sekuhlangana amalahle omlilo.
UNksz uBusi Mavuso, oyi-chartered accountant nesikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa
Ukhuthazwa wukuthanda ukufukula abantu abamnyama nabesifazane embonini ezimele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
KUHLE ukuqala into uyiqede, kungakhathaleki ukuthi kukuthatha isikhathi esingakanani. Lena ngenye yezinto akholelwa kuzo oyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa (i-BLSA).
I-RESOURCE Generation imemezele ukuthi uDkt uKonji Sebati obengomunye wabaqondisi bebhodi layo ushonile. UDkt uSebati, osebenze nezinkampani ezinkulu zezempilo emhlabeni, uke waba yinxusa leNingizimu Afrika eSwitzerland naseFrance.
I-TIGER Brands imemezele ukuthi imali engenile inyuke ngo-8% yafinyelela kuR16.4 billion ezinyangeni eziyisithupha eziphele mhla ka-31 kuMashi. Inzuzo engenile inyuke ngo-21% yafinyelela ku-741 cents isheya.
I-TOYOTA Financial Services yaseNingizimu Afrika isiqoke uNkk uSindisiwe Mabaso-Koyana njengelungu elisha lebhodi yalo. UNkk Mabaso-Koyana uqokelwe nasekomitini elibhekele ukucwaninga amabhuku.
ABAPHISI bewayini iDistell bamemezele ukuthi bashelwa yinkampani kabhiya iHeineken efisa ukuthenga isabelo esikhulu sebhizinisi labo. Bazise labo abanamasheya enkampanini ukuthi kunezingxoxo ezikhona okungenzeka uma seziphothuliwe zithinte inani lamasheya.
IBHANGE loMbuso aliyishintshanga imalimboleko ngenkathi limemezela ukuthi isazoqhubeka ibe wu-3.5%. Umphathi waleli bhange uMnu uLesetja Kganyago uthe balindele ukuthi amandla emali asazoba kuleli zinga akulona ngo-2021. Uthe sebekubuyekezile ukukhula komnotho, wathi balindele ukhule ngo-4.2% esikhundleni sika-3.8% ababewushilo ngoMashi.
UMnu uSenzo Mosiya, umnikazi weMoss Vintage yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Awukho omunye umsebenzi ake wazibona ewenza umsikingqephu odle ngesitayela esihlukile nosenamakhasimende kwezinye izifundazwe. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
UVUKE wazithatha phezu kokucikiza kwebhizinisi ngenxa yobhubhane iCovid-19 umsiki wengqephu waseThekwini onesitayela esihlukile.
KULELI sonto sibhale ngokuthi sebeyanda abantu abangamaphanta nabanganqeni ukuqala nokwenza amabhizinisi okungenzeka emehlweni abanye abukeleke phansi. Kulolu daba sithe esinye sezizathu sikhula isibalo samaphanta yingenxa kasomabhizinisi owusaziwayo uMnu uSbu Leope, … Read More
Ukwenze kwaba sesitayeleni ukuphanta uDJ Sbu, okwenze abaningi baqale amabhizinisi eceleni
Kwabaningi imali yomqashi iphela endleleni. Kwabangasebenzi ukunqena amehlo abantu akulibeki ibhodwe eziko. Ikhona imali ekudayiseni nasekuphanteni. UZANELE MTHETHWA uyabika
INGOMA yomculi wekwaito osashona uMandoza eyashisa izikhotha ngama-’90s yayithi “Uzoyithola kanjani uhlel’ ekhoneni”. Yize le ngoma yayidle nangesigubhu esisukumisa ngisho nesinedolo, umyalezo wayo wawucace bha futhi unesifundo.
UMnu uLetlhogonolo Motseeng, umsunguli weMoja Chicken yaseGoli, eGauteng
Ugqugquzelwe wuthando lwezinkukhu ukuthi avule indawo yokudlela edayisa inkukhu nekhula ngamandla. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
NAKUBA ewumuntu onesipiliyoni sokudayisa nokukhangisa kodwa naye uke wabhekana nezingqinamba ezijwayelekile kosomabhizinisi abasafufusa eNingizimu Afrika, kangangokuthi uke wangabi nakhaya kabili ezama ukuhlenga ibhizinisi.
Maningi amathuba embonini yokufuya izinkukhu.
Intsha ayiqalaze amathuba ekufuyeni izinkukhu, kuloba uTEBOGO MOKWENA
MANINGI amathuba akhona kwezolimo zemikhiqizo yezinkukhu futhi lesi yisikhathi sokuthi intsha iwasebenzise. Loku kuvele ngesikhathi kunePoultry Sector Masterclass muva nje.
Asigade singawaphindi amaphutha afanayo ekunqandeni isiqubu sesithathu seCOVID-19, kuloba uBusi Mavuso
KUYASIKHATHAZA sonke ukuthi kungenzeka kube nesiqubu sesithathu sokuhlasela kweCOVID-19. Ngesonto eledlule iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ihlabe ikhwelo lokuthi izinqumo ezenziwayo ngaloku kumele zisuselwe ebufakazini futhi sizimisele ukusiza.
Hambisana nezikhathi wenze impilo yamakhasimende ibe lula, kuloba uNtokozo Biyela
NGESONTO elidlule sizwe kuthiwa iSouth African Post Office ibuyele enkantolo ukuyomisa zonke izinkampani ezihambisa ngesivinini izimpahla ezinesisindo esingaphansi kuka-1kg ebantweni ezweni lonke.
UMnu uYanga Dlamini, umsunguli weNgatsho Fruits yaseGqeberha, eMpumalanga Kapa
Umfundi wasenyuvesi wayethi uqala into encane yokuxosha ikati eziko kanti akazi izozala ibhizinisi lezithelo eselichumile manje. Uxoxe noTEBOBO MOKWENA
UQALE ukudayisa izithelo ngoba ezifunela amasentshana okondla kubo kodwa sekuvele kwaphenduka umsebenzi awuthandayo kanti usenamaphupho amakhulu ngawo.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngokuthenga umhlaba endaweni yenkosi
UJames Ngcobo, umqondisi wezobuciko eMarket Theatre eGoli, eGauteng
Izithombe: Zithunyelwe/wu-Iris Dawn Parker
Uthando lokuxoxa izindaba, ubhuti wendawo, uthando lokufunda, ukuthatha amathuba nokwazisa umsebenzi kulibeke esicongweni namuhla iciko eselingesinye sezikhulu zeMarket Theatre. Lixoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwalo
“ISHASHALAZI alimnyama noma mhlophe. Ishashalazi limnandi noma limbi. Akunandaba ukuthi lenziwe wubani. Okumqoka wukuthi lenziwe kanjani.”
UNksz uNokubonga Ntuli, umnikazi weSkyee Blue, egxile ekuthungeni imifaniswano yesikole
Uthando lokwenza imisiko nokuthunga lwayingena isafunda isikole intokazi. Nokho enyuvesi izishiye phakathi izifundo zokuthunga, yaqala ezomunye umkhakha ngeposi. Ixoxe noLANGA KHANYILE
INTO ayiqale esikoleni kwaGrade 8 ukuchitha isizungu, useziphilisa ngayo. Kanti uza kabi. Usethungela abantu imisiko abafika nayo, ayidwebile kanti umsebenzi ususimeme kangangokuthi usethunga imifaniswano yesikole.
UMnu uMxolisi Kaunda, iMeya yaseThekwini, ophakathi nowebhantshi nothayi, eZimbuzini, eMlaza
Uhlelo lokusimamisa umnotho wasemalokishini nokuthi ‘zidle ekhaya’ luyaqhubeka. UMasipala uvule indawo yezigidigidi edayisa izinsimbi zezimoto nezindawo zabahwebi eMlaza
OHLELWENI oluyingqophamlando ezweni lokuthi kube nendawo yokuphucula indawo yokusebenzela yabahwebi abancane akade benamatafula ludle imali ewu-R22 million, kuyaqhutshekwa nokusimamisa umnotho wasemalokishini, njengoba kuvulwe indawo yabo eZimbuzini, eMlaza, eThekwini.
UNksz uNomandla Ngcoya, umsunguli weD-Chem Group yaseMgungundlovu, eKZN, ekhiqiza amakhambi nezinto zamakhemikhali
Ukungena emkhakheni ayengawuqondile enyuvesi kumlungiselele ukungena ebhizinisi lokukhiqiza elenza ezibukwayo manje. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WASHODA ngephuzu ukuthi athathwe ukwenza izifundo zobudokotela enyuvesi. Loku kwenza waqoma ukwenza iBSc, nokwamvumela ukuthi axube izifundo ezinhlobonhlobo zalo mkhakha.
I-DebtBusters ehlanganise i-Debt Index, umbiko ongesimo sezikweletu sabantu baseNingizimu Afrika
Bacwile ezikweletini abantu baseNingizimu Afrika kodwa futhi ucwaningo luveza ukuthi yinkinga abayisukumelayo
SINYUKILE isibalo sabantu baseNingizimu Afrika abacwile ezikweletini ngekota yokuqala ka-2021.
Inkinga kagesi izoxazululeka uma osopolitiki sebenesibindi sokushintsha imigomo enqindanayo, kuloba uBusi Mavuso
NGESONTO eledlule ngibhale ngokubaluleka kokuthi kube nogesi owanele ukuze kuvuseleleke umnotho. Cishe lena yiyona nto ethinta umgomo womnotho ebaluleke kunazo zonke kokumele sikulungise singezwe kanti siyiBusiness Leadership South Africa, sizimisele ukweseka uhulumeni.
Gada izinto ezingakhinyabeza ibhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela
ENGOSINI edlule sibheke izinto ezinomphumela ongemuhle nezingagcina seziyingozi ekuphathweni kwebhizinisi ngendlela efanele.
U-CLICKS umemezele ukuthi uzothenga amakhemisi akwa-Pick n Pay, nazoshintsha abe ngawakwaClicks. Le nkampani edayisa izimonyo nemikhiqizo yezempilo iyona enkulu kunazo zonke kulo mkhakha eNingizimu Afrika. Ngemva kokuthenga la makhemisi izoba nawu-632.
I-JOHANNESBURG Stock Exchange isiqoke uMnu uPhuthuma Nhleko njengelungu elisha lebhodi layo. Uzoqala kuleli bhodi kusukela mhla ka-1 kuJulayi. UNhleko uwuqweqwe lukasomabhizinisi ohlonishwayo emhlabeni jikelele emikhakheni ehlukene. Waziwa kakhulu ngegalelo lakhe ekukhuliseni uMTN, awuhola eyisikhulu esiphezulu kusukela ngo-2002 kwaze kwaba wu-2019.
OMnu uNgwako Sekhula noMokgalakgathe Tladi, abasunguli benkampanini yezolimo i-VegeThenic
Uthando lwemvelo nesayensi seluzale ibhizinisi lezolimo elihlukile ezinsizweni ezimbili ezingabalimi nezigabe ngeziqu zalo mkhakha. Baxoxe noMbele
BADLE umhlanganiso bebhincisela nxanye amaqembu abalimi abasafufusa awu-69 emazweni awu-23. OMnu uNgwako Sekhula noMokgalakgathe Tladi bahlomule ngoR15 000 kanti bazocijwa kulo mkhakha ngaphansi kohlelo i-Entrepreneurs Futures Network.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngezindleko eziphathelene nama-Sectional Title
UNkk uNomusa Mazibuko, umnikazi wamaVisit-Vakasha Guest Lodge aseMalahleni, eMpumalanga
Owaqala ngebhizinisi lezinwele namuhla usewugalagala kwezokuvakasha kanti usevulele inqwaba amathuba omsebenzi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
SEKUFANA nephupho ukuthi uke wapatanisa ezama ukwenelisa izivakashi usomabhizinisi osenezindawo zokulala ezindaweni ezintathu eMalahleni, eMpumalanga.
UNkk uMaseru Mkhwane, weMazibuye Emasisweni Tourism Consulting Agency, omunye wabagqugquzeli bomkhankaso wokudala amathuba kubasikingqephu baseNingizimu Afrika phesheya
Osomabhizinisi baseNingizimu Afrika abake bahlala phesheya babone isidingo sokusungula uhlelo lokusiza abasikingqephu abasafufusa. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabo
IBHIZINISI lemfashini lingelinye elibhekene nezingqinamba ngenxa yezinga eliphezulu lokuncintisana nokungasekwa kwabasikingqephu baNingizimu Afrika.
UNksz uGugulethu Nxumalo, umnikazi weZonke Bonke Cakes yaseMlaza, eThekwini, KwaZulu-Natali
Ukudilizwa emsebenzini emva kweminyaka eyishumi esikhundleni kumkhuthaze ukuthi athuthukise ikhono lakhe lokubhaka. Manje unebhizinisi eliqhuba kahle kanti usiza abanye ukuthi baqale awabo. Uxoxe noNOKWANDA NCWANE
UFISA ukuba nebhikawozi yakhe owesifazane osezakhele igama ezinkundleni zokuxhumana ngokucobelelana ngolwazi lokupheka nokubhaka.
IKhomishini yokuNcintisana ilwe namanani agugisa iphakethe ngesikhathi seCOVID-19
Umbiko weKhomishini yezokuNcintisana ngomphumela wobhubhane iCOVID-19 IKhomishini yezokuNcintisana ibhekane nobunzima beCOVID-19
IKhomishini yezokuNcintisana isanda kukhipha umbiko wayo wokugcina ngomphumela weCOVID-19. Lo mbiko unaba ngezinto ezitholwe yiKhomishini ngomphumela weCOVID-19 Block Exemptions nomsebenzi weKhomishini ngenkathi kubhoke ubhubhane.
Izingqinamba nobungozi ongahlangana nazo ebhizinisini, kuloba uNtokozo Biyela
KULELI sonto ngifisa sibheke izinkinga ongahlangabezana nazo uwusomabhizinisi noma ebhizinisini okulona ngezigaba zalo.
Ayisukunyelwe indaba yokushoda kukagesi, kuloba uBusi Mavuso
SEKUPHELE cishe iminyaka ewu-15 siphila nokushodelwa wugesi. Kunzima ukusho ukuthi sekuwudle kangakanani umnotho. Izibalo zisivezela ingxenye yesithombe njengokuthi imboni yokukhiqiza ilahlekelwe yimisebenzi ewu-400 000 kanti nenzuzo embonini ezimele isiyacikizela seloku kwaqala ukucishwa kukagesi ngo-2007.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza imigudu yomthetho elandelwayo uma uthenga umuzi
UMnu uKipas Melodi, umlimi waseHazyview, eMpumalanga, noNksz uKhutso Rapudubudu wakwaCheckers
Usedayisela izitolo zaseShoprite nakwaCheckers umlimi owaziqalela ngengadi encane. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UQALE uhambo lwakhe ngengadi kwakhe eHazyview, eMpumalanga, edayisela abantu bendawo. Kodwa ukuhlangana kwakhe nelungu lehhovisi lenxusa lakwa-Israel kuguqule impilo yakhe njengoba namhlanje esedayisela izitolo zaseShoprite nakwaCheckers.
UMnu uBulelani Balabala, umsunguli we-IAF Brands neTownship Entrepreneurs Alliance
Ulwela ukuhlonishwa kosomabhizinisi baselokishini aphinde abaphonsele inselelo kwabona uqobo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
UKUTHI ibhizinisi lizinze elokishini akusho ukuthi umkhiqizo walo awukho ezingeni, akusho ukuthi kumele umkhiqizo walo ushibhe futhi akusho ukuthi lizohluleka ukwenza umsebenzi.
UMnu uMondli Ndlela, umnikazi weGrafton Street Trading and Projects yaseThekwini, KwaZulu-Natali, egxile kwezokuvikela
Uqale ewunogada osenenkampani yonogada nezinye kweminye imikhakha. Ukuzimisela kulo msebenzi kwenze wagcina ethole ithuba lokuqeqeshelwa ukuba yimenenja. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
UFUNA ukubuyisa isithunzi konogada usomabhizinisi naye owaqala kulo msebenzi abanye abawuthathe njengophansi.